Gudoomiyaha G/Banaadir oo shaqada ka joojiyey shaqaale bixiyey dhul waddo ah. - Caasimada Online
Home Warar Gudoomiyaha G/Banaadir oo shaqada ka joojiyey shaqaale bixiyey dhul waddo ah.
Gudoomiyaha G/Banaadir oo shaqada ka joojiyey shaqaale bixiyey dhul waddo ah.
Muqdisho (Caasimadda Online) – Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa shaqada ka joojiyey Agaasimiha Waaxda Farsamada iyo farsamo yaqaanno ka tirsan waaxdaas oo si sharci darro ah dhul waddo ah ugu cabiray dad rayid ah.
Dhulkan oo ahaa waddo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka ee degmada Dharkiinleey, waxa ay laamaha baarista dhulka ee gobolka Benaadir ay soo xaqiijiyeen in si sharci darro ah ay dhulkan u soo cabireen shaqaalaha shaqada laga joojiyey.
Guddoomiyaha Gobolka ayaa markii uu xilka la wareegey digreeto ku joojiyey dhismayaal dhulkan ah, iyadoona baaritaanka lagu ogaaday in Agaasimaha Waaxda Farsamada ee shaqada laga joojiyey iyo qaar ka mid ah shaqaalaha waxdaas ay soo gudbiyeen warbixin ay ku musuq maasuqayaan dhulkan.
Eng.Yariisow ayaa sheegay in sharciga la hor geyn doono qof kasta oo ku lug yeesha musuq maasuqa dhulka iyo bixinta ruqasadaha sharci darrada ah, taas oo asaas u ah qorsheyaasha Maamulka Gobolka ee ka dhanka ah musuq maasuqa.
“Waxaan kula dardaarmayaa bulshada Gobolka in ay hubiyaan dhulka loo cabirayo ama laga iibsanayo iyo sharciyada loo jarayo ka hor inta aysan maalgashan, si ay uga hortagaan ciqaab iyo ganaax ay ku muteysan karaan maalgashiga dhulka danta guud.”
Guddoomiyaha ayaa carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in Maxkamadaha Garsoorka si deg deg ah loo herkeeno eedaysanayaashan, taas oo horseedaysa guula laga gaaro qorshaha Maamulka Gobolka Benaadir ee ka dhanka ah musuq maasuqa iyo eexda.
Dhulkan ayaa ku yaalla Xaafada Xoosh ee degmada Dharkenleey Gobolkan Banaadir,waxana Maamulka gobolka Banaadir uu sheegay in la doonayay in laga dhigo deeagan sidaas daraadeedna uu u joojiyay.